प्रकृतिको सात रंगजस्तै फलफूलमा पनि सात रगंको संयोग : कुन रंगको के अर्थ ? - Medianp.com
प्रकृतिको सात रंगजस्तै फलफूलमा पनि सात रगंको संयोग : कुन रंगको के अर्थ ?
काठमाडौँ । हाम्रो घरवरिपरि विभिन्न प्रकारका सागसब्जी र फलफूल पाइन्छ । जसले हाम्रो शरिरलाई विभिन्न किसिमका पोषक तत्वहरु दिई बलियो बनाउँछ । तर तपाईले कहिल्यै विचार गर्नु भएको छ ? प्रकृतिमा पाइने सात रगंजस्तै फलफूलको कुन रगंको के अर्थ छ भनेर ? किनभने हामीले खाने फलफूलको पनि सातै रगं हुन्छ । आज हामी तपाईलाई यही सात रगंको फलफूल र सागसब्जीको रगं अनुसार गुण बताउदै छौँ । हेर्नुस् कुन रगंको के अर्थ ?
हामीले पहेँलो र सुन्तला रगंको खानेकुरामा केरा , सुन्तला , आँप ,कागती, मेवा जस्ता फलफूल खान्छौँ । यसमा अल्फा केरोटिन, बीटा केरोटिन, भिटामिन सी, बायो फ्लेबोनाइड आदि तत्वहरु पाइन्छ । जसले हामीलाई चाडै बुढो हुन नदिनुका साथै छालालाई सुन्दर बनाउँछ । त्यसका साथै फोक्सो ,मुटु रोग लाग्न रोकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउँछ ।
हामी हरियो रगंको फलफूलमा सागपात , बन्दाकोपी ,फूलकोपी ,हरियो मटर , प्याज जस्ता चिजहरु खादै आएका छौँ । यस्ता रगंको फलफूलमा भिटामिन ए, बी, सल्फोराफिन, आईसोथायोसानेट, इन्डोल, ल्यूटिन जस्तै न्युट्रिएन्ट्स पाइन्छ । यसले आखाँको ज्योति बढाउनुका साथै दाँत र हड्डीलाई बलियो बनाउँछ ।
हामी रातो रगंको फलफूलमा अंगुर, गाँजर, स्ट्रबेरी, रातो खुर्सानी, अनार जस्ता चिजहरु खान्छौँ । यिनीहरुमा लाइकोपेन र एन्थोसायनिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यि तत्वहरुले हाम्रो स्मरणशक्ति बढाउनुको साथै शरिरलाई फुर्तिलो र क्यान्सर हुने सम्भावनाबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
हामी सेतो रगंमा मुला , प्याज,च्याउ, जस्ता खानेकुराहरु नियमित खान्छौँ । जसमा एलीसीन, फ्लेबोनाइड र न्युट्रिएन्ट्स पाइन्छ । यि तत्वहरुले कोलेस्ट्रोल कम गर्नुका साथै मुटु रोग , क्यान्सर र टुयुमर हुने सम्भावनाबाट पनि कम गर्छ ।
प्रकृतिमा निलो र बैजनी रगंको फलफूलहरु पनि धेरै छन् । जसमा आलुबगडा,अगुंर ,भेन्टा,बन्दाकोपी आदि रहेको छ । यसमा छालालाई सुन्दर ,कोमल बनाउने एन्थोसायनिन जस्ता तत्वहरु पाइन्छ । त्यसका साथै क्यान्सर र मुटुरोगबाट बच्न पनि सहयोग गर्दछ ।
शिल्पा शेट्टी आफुले लगाएको जिन्स पाइन्टको कारण भइन् ट्रोलको पात्र ,हेर्नुस भिडियो
अचम्मको गाई ! जो मान्छेसँग मज्जाले फुटबल खेल्छ ,हेर्नुस भाइरल भिडियो